Iindaba -IglasiTec-Imiceli mngeni emitsha
IGlasstec VIRTUAL ukusuka nge-20 ukuya kwi-22 ka-Okthobha iwuvale ngempumelelo umsantsa ophakathi ngoku kunye ne-glasstec ezayo ngoJuni 2021. Ngomqondo wayo oquka ukuhanjiswa kolwazi lwedijithali, inoveli yamathuba okubonisa kunye nokhetho olongezelelekileyo lokunxibelelana, iqinisekisile icandelo leglasi lehlabathi .
“Ngepotifoliyo ebonakalayo ye-glasstec uMesse Düsseldorf ubonakalisa ukuba ingaphumelela ekuhlanganiseni amashishini kwihlabathi liphela, hayi kwimisitho ebonakalayo kuphela kodwa nakwifomathi yedijithali. Oku kuthetha ukuba iyaqhubeka nokuzibeka kwindawo eyi-1 yokunxibelelana neshishini lonxibelelwano, utshilo u-Erhard Wienkamp, ​​u-COO Messe Düsseldorf.
“Ubhubhane wehlabathi ngumceli mngeni omkhulu kwishishini leglasi kwaye ke ngokunjalo koomatshini kunye nabavelisi bezityalo kweli candelo. Ke ngoko, kwakubaluleke kakhulu ukuba uMesse Düsseldorf asinike ifomathi entsha "glasstec VIRTUAL" ukuze sikwazi ukubonisa iimveliso zethu ezintsha nakula maxesha. Yahlukile kwi-glasstec eqhelekileyo, kodwa uphawu olubalulekileyo nolucacileyo kumzi mveliso. Sasonwabile ukusebenzisa ithuba lenkqubo ebanzi yenkomfa kunye nethuba lokubonisa uphuhliso olutsha kunye nokuqaqambisa ngeeseshoni zewebhu kunye namajelo ethu, sikwafumana ingxelo entle. Nangona kunjalo, sijonge phambili ekuhlanganeni kwakhona kwi-glasstec eDusseldorf ngoJuni ka-2021 ”, utshilo u-Egbert Wenninger, uSekela Mongameli weCandelo leShishini leGlasi, uGrenzebach Maschinenbau GmbH kunye noSihlalo webhunga labacebisi le-glasstec.
“Ngexesha lobhubhane, esi sisombululo sisivumele ukuba sinike ishishini iqonga elongezelelekileyo lokuqinisa nokwandisa abafowunelwa bamanye amazwe. Ngoku kugxilwe ngokupheleleyo ekulungiseleleni i-glasstec, eza kubanjelwa apha eDusseldorf ukusuka nge-15 kuye nge-18 kaJuni 2021, utshilo uBirgit Horn, uMlawuli weProjekthi glasstec.
Ngaphezulu kwe-120,000 yamaphepha abonisa umdla onomdla othathwe luluntu lweglasi kumxholo we-glasstec VIRTUAL. Kwigumbi lokubonisa, ababonisi abangama-800 abavela kumazwe angama-44 bazise iimveliso zabo, izisombululo kunye nokusetyenziswa kwazo. Ngaphezulu kwabantu abangama-5 000 abathathe inxaxheba kwiifomathi zonxibelelwano. Zonke iiseshoni zewebhu kunye neengoma zengqungquthela ziya kufumaneka kungekudala. Amagumbi okubonisa abathathi-nxaxheba aya kubakho nakubakhenkethi kude kube yi-glasstec ngoJuni 2021.